प्युठान ग्रामीण पर्यटनको गन्तब्य – केबी मसाल
प्युठान ग्रामीण पर्यटनको गन्तब्य
September 20, 2017 KB Mashal0Comment
नेपालको भूगोल ३५ जिल्ला भएको समयमा पनि प्युठान छुट्टै जिल्लामा थियो । यसको ठूलो भाग पछि रोल्पा जिल्लामा मिलाइएको हो । सडक यातायतको सञ्जाल बन्नु भन्दा पहिले प्युठान जिल्लाको विशेषगरी खंलगा आसपासका मानिसहरुको व्यापारी केन्द्र पाल्पाको तानसेन र वुटवल मानिन्थो । कतिपय मानिसहरु नुनतेल खरिदको लागी भारतिय सिमा कृष्णनगर, बडनी र कोइलावास समेत पुग्ने गर्दथिए । ति सबै कुरा अहिले एकादेशको कथा भएको छ । राप्ती अन्चलको प्युठान जिल्ला पहाडी जिल्ला हो । पहाड, वेसी, टार जस्ता सुन्दर प्रकृतीले बनेको प्युठानको भूगोल सामुन्द्रिक सतह बाट ३०५ देखि ३,६५९ मिटर सम्मको उचाइमा रहेको छ । नेपालको भूगोललाई विभाजन गर्दा एक समय प्युठान स्वर्गद्धारी अन्चलमा परेको थियो । तर स्वर्गद्धारी अन्चलको नामाकरणले लामो समय लिन पाएन । अहिले प्युठान नगरपालिका र स्वर्गद्वारी नगरपालिका गरी दुई नगरपालिका एव गौमुखी माण्डवी, सरुमारानी, मल्लरानी, नौवहिनी, झिमरुक र ऐरावती समेत सात गाउँपालिका भएको छ । प्युठान जिल्लाको सदरमुकाम खंलगा हो । तर सरकारी कार्यालयहरु भने केहि विजुवारमा समेत रहेका छन ।
प्युठानमा धार्मीक पर्यटकिय स्थलहरु धेरै रहेका छन । सुलभ यातायातको सुविधा र प्रचार प्रशारको कमिले गर्दा धेरै ऐतिहासिक महत्व रहेका स्थलहरु ओझेलमा परेका छन । प्युठान जिल्लाको दक्षिण अर्घाखाची संग सिमा रहेको अर्थात झिमरुक र माडी खोलाको संगम स्थल ऐरावती र हंसपुरको ऐतिहासिक स्थल त्यसै गरी गौमुखी, कालिका मन्दिर, मल्लरानी, भित्रीकोट, झाक्रिस्थान, विजुलीकोट, वरौलाकोट, जावुने दह, त्रिवेणी जस्ता पर्यटकिय महत्वका स्थलहरु पनि प्युठान जिल्लामा छन । पर्यटकिय स्थल, सुन्दर प्राकृतीक पहाडी भूगोलको अध्ययन भ्रमण गनको लागी प्युठान जिल्ला राम्रो मानिन्छ ।
पछिल्लो समय पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्युठानको ओखरकोटमा ग्रामीण पर्यटनको विकास गर्न थालिएको छ । ओखरकोटमा आन्तरिक पर्यटकहरुको लागी होम स्टे सञ्चालन हुन लागेको छ । ओखरकोट तथा गौमुखी क्षेत्रमा अवस्थित विभिन्न ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलहरुलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले ‘होम स्टे’ सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो । ओखरकोट वरपरका करिव २२ घरमा ‘होम स्टे’ सञ्चालनको तयारी गरिएको छ । सुरुको अवस्थामा आन्तरिक पर्यटकहरुलाई केन्द्रित गर्दै तत्काल ‘होम स्टे’ सञ्चालन गर्ने तयारीमा ओखरकोटका मानिसहरु लागेका छन ।
प्युठान जिल्लामा ऐतिहासीक, पुरात्वतिक, तथा धार्मिक महत्व बोकेका ग्रामीण पर्यटकीय सम्भावनाका क्षेत्रलाई लगानीको आवश्वता रहेको छ । ग्रामीण पर्यटकीय सम्भावना भएका क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउन नसकेका कारण र सो ठाउँमा पर्यटकको सेवा सुविधा अप्रयाप्त भएकै कारण ग्रामीण पर्यटकीय विकास ओझेलमा परेको छ । सरकारले त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यहाँको भौतीक पूर्वाधार निर्माण गर्न आवश्यक छ । ग्रामीण पर्यटन विकासमा लगानी नै गर्न सकेको छैन भन्दा पनि फरक नपर्ला ? ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पाँच ‘चर’ अर्थात ‘नेचर’, ‘कल्चर’, ‘एग्रीकल्चर’, ‘एडभेन्चर’ र ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’ र सात ‘स’ अर्थात् ‘सेवा सुविधा’, ‘सुरक्षा’, ‘सूचना र सञ्चार’, ‘सरसफाइ’, ‘संस्थागत व्यवस्थापन’, ‘समन्वय र सख्या बढाउने’ को अवधारणालाई अभियानकै रुपमा लैजान जरुरी भएको छ ।
नेपालमा पर्यटनको विकास गर्दा केही उच्च हिमशिखर, धार्मिक वा ऐतिहासिक महत्वको स्थानहरु वा प्राकृतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण स्थानहरुलाई नै महत्व दिने गरिएको छ । तर पर्यटनको विकासका सन्दर्भमा एउटा अर्को पक्षप्रति पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो हो, ग्रामीण पर्यटन । यो पक्षलाई विकसित गर्ने प्रयत्न गरियो भने त्यसले पर्यटनको विकासमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने छ । अर्को शब्दमा त्यसले पर्यटनको विकासमा गुणात्मक फड्को नै ल्याउने छ । त्यसबारे देशका पिछडिएका क्षेत्रहरुको विकासमा धेरै मद्दत पुग्नुका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्नेलाई पनि प्रत्यक्ष रुपले धेरै लाभ हुने छ ।
होमस्टेको अवधारणले ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेका पर्यटकहरुलाई बसोबासलगायत स्थानीय कलासंस्कृति, रीतिरिवाज तथा परम्परा र रहनसहनको उत्कृष्ठ अनुभव हासिल गर्नसमेत सहज भएको छ । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रको प्रतिफल ग्रामीण क्षेत्रमा पु¥याउन, ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई पर्यटन सेवामा सहभागी गराउन, स्थानीय स्तरमा स्वरोजगार सिर्जना गर्न यसले सहयोग पुग्ने छ । मानिस स्वभावैले एकै स्थानमा बस्न चाहाँदैन । परिवर्तनको अपेक्षा हरबखत गरिरहन्छ । कुनै नयाँ स्थानमा गएर नयाँ नयाँ अनुभवहरु सँगाल्ने र ती अनुभवहरु आफ्ना साथीभाइ परिवारका सदस्यहरुलाई बाँडने इच्छा हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले जति कुरा एउटै स्थानमा बसेर सिक्दछ त्यो भन्दा पनि बढी भ्रमणबाट सिक्दछ ।
जीवनलाई अनुभवहरुको संगालो पनि भनिन्छ । त्यसैले अनुभवहरुबाट आफ्ना अनुभूतिहरुलाई निखार्दै अगाडि बढनका लागि भ्रमण अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । अझ आफ्नो मन मिल्ने साथीहरु तथा घरपरिवारका सदस्यहरुसँग गरिएको भ्रमणबाट भने धेरै कुरा सिक्ने मौका प्राप्त हुन्छ । पढेर भन्दा पनि आँफैले देखेर बुझेको कुरा चीरस्थायी हुन्छ । यसरी लिएको ज्ञान विस्मरण पनि हुँदैन । जीवनमा भ्रमणबाट प्राप्त गरेका अनुभवहरुलाई अरुसँग बाँड्दा पनि छुट्टै आनन्द पनि आउँदछ । भ्रमणलाई मनोरञ्जनका रुपमा मात्रै लिइनु हुँदैन । कुनै पनि नयाँ नयाँ स्थानहरुमा पुग्नासाथ आफूलाई रुची लागेको क्षेत्रहरुका बारेमा कुनै पनि ऐतिहासिक वा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रहरुका सन्दर्भमा जानकारी लिने र त्यसका बारेमा टिपोटहरु राख्नु पर्दछ ।
ग्रामीण पर्यटन र ग्रामीण विकासको आपसमा घनिष्ट सम्बन्ध छ । एकातिर, ग्रामीण विकास नभइकन ग्रामीण पर्यटनको विकास हुन सक्दैन । जुन कारणले यतिखेर पर्यटनसित धेरै गाउँ जोडिएका छन । ग्रामीण पर्यटनले गाउँहरुको विकासको सम्भावना बढेर जान्छ । फुर्सदको समयमा एक पटक प्युठान जिल्ला घुमघाम गर्ने हो की ?
मिती ः– २०७३ फागुन १२ गते दाङ
← संस्कृत भाषाको तपोभूमि पणेना
दसै सांस्कृतिक पर्व हो →